हाङयुग : पालमको पहिचान - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
हाङयुग : पालमको पहिचान
चैत्र ६, २०७१ राजन मुकारुङ
आजभन्दा पन्ध्र वर्षअघि, फागुन महिनाको एक बिहान । मेरो पहिलो कवितासङ्ग्रह 'सेतो आरोहण' प्रकाशित भएको दुई साता नाघ्दै थियो ।
आजभन्दा पन्ध्र वर्षअघि, फागुन महिनाको एक बिहान । मेरो पहिलो कवितासङ्ग्रह सेतो आरोहण प्रकाशित भएको दुई साता नाघ्दै थियो । अघिल्लो बेलुका फोनमा हाङयुग नामको व्यक्तिले किताबबारे कुरा गर्न बिहान भेट्न आउने भनेको थियो । उबेला, कसले पो लेखोस् र हाम्रो किताबबारे । यस्तो कुुराले को खुसी नहोस् ? भर्खर थालिएको थियो सैनिक आवाज, मासिकमा जिम्मेवारी । राति अबेरसम्मको लछारोले बिहान निकै बितिसक्दा पनि ओछ्यानमै तङ्गि्रन खोज्दै थिएँ म । कसैले बाहिरबाट ढोका ढक्ढकायो । मैले चुक्कुल हेरेँ, खुलै छ, पस्नोस् भन्दिएँ । ढोका ठेलेर पस्यो एउटा युवक । हट्टाकट्टा र खाइलाग्दो ज्यानको तर तालु भने उमेरभन्दा अलि खुइलिएको ।
राजन सर होइन त तपाईं ? युवकले सोध्यो ।
हो । बस्नोस् न, मैले उसलाई पल्लो खाट देखाएँ । मेरो कोठामा बस्नका लागि कुर्सी, सोफा-सेट थिएन, हुँदैन, छैन अहिले पनि ।
म हाङयुग अज्ञात, उसले मतिर हात बढायो ।
हामीले हात मिलायौं । ऊ पल्लो खाटमा बस्यो ।
के थरी पर्नुभो ?
थाम्सुहाङ । लिम्बू ।
अनि किन पो अज्ञात बनाउनु भाको आफैंलाई ?
ह्याह्याह्या, हाङयुग खुला रूपले हाँस्यो । भन्यो, म पो तपाईंंलाई सोध्न आको ।
हेहेहे । म पनि भर्खरै सम्पादक भएको छु । पेसाको परिचय दिन खोजेँ होला नि ।
त्यसपछि उसले सोध्दै ल्यायो । त्यसबेला शशि लुमुम्बु, पदम गौतम, अच्युत्तम भट्टराई र म सिर्जनशील अराजकता बारे छलफल गरिरहेका थियौं । प्रकाश साप्ताहिकमा पदमले हल्का लेखेका पनि थिए । हाङयुगले पढेको रहेछ । उसले किताबका बारे भन्दा पनि साहित्यिक आन्दोलनकै बारे बढी सोध्यो ।
उहाँहरू अराजकतासँग अलि डराइरहनुभएको छ । शालीन विद्रोह मा बढी जोड गरिरहनुभएको छ । मचाहिँ सिर्जनशील अराजकता कै पक्षमा बढी छु । मैले साँचो कुरा भनिदिएँ ।
पर्सि मङ्गलबार रूपरेखा साप्ताहिक हेर्नुहोला है । भनेर हाङयुग गयो ।
म ओछ्यानबाट उठेँ । त्यसबेला पो मलाई ज्ञात भयो, अहो ! म त हिजोजस्तो सुतेको त्यस्तै पो रहेँछु । धत् ! मेरो सुद्धि ! के ठान्यो होला गाँठे ? यस्तै पो लेखिदिने हो कि ? नभन्दै, मङ्गलबार रूपरेखा साप्ताहिक पढेँ । उसले लेखेको थियो, ... म राजनको कोठामा पुग्दा उनी ओछ्यानमै थिए । बेलुका सुतेकाजस्तै, अराजक पाराकै ।
म जिल्ल परिहालेँ । धन्न नाङ्गैचाहिँ भनिदिएनछ । बुझ्नेले त बुझिहाल्छन् । आफ्नो लेखको अन्तिम पङ्क्तिमा उसले यस्तो लेखेको थियो, ...राजन मुकारुङलाई पढिरहँदा लागिरहेछ कि म सानू बैरागी काइँला पढिरहेँछु... ।
यो वाक्यांशले भने मलाई चिमोटेको थियो । घोचेको हो मज्जैले । कसैको नामसँग जोड्यो कि उबेला साह्रै नमिठो लाग्थ्यो मलाई । हियाएकै आभास हुन्थ्यो । दिमाग तताइहाल्थ्यो । अहिलेजस्तो मोबाइल थिएन । उसको नम्बर पनि मागिनँ छु । नत्र राम्रै पाराको धन्यवाद दिन्थेँ हुँला । पिरोलिँदै थिएँ । दिउँसो दुई बजेतिर हाङयुगको फोन आयो । सोध्यो, रूपरेखा पढ्नुभयो त ?
कस्तो लाग्यो सर ?
राम्रै छ । यसरी नै मिहिनेत गर्दै जानुस्, भविष्यमा ईश्वरवल्लव बन्ने सम्भावना छ । मैले भनिदिएँ । ह्याह्याह्या ! गरेर ऊ हाँस्यो । भन्यो, भरै कतै भेटूम सर ।
भेट्ने ठाउँ, पुतलीसडकको पाल्पाली भोजनालय एन्ड रेस्टुरेन्ट तय भयो । भेट भयो । कुराकानी भयो । हाम्रो लागि त्यही सानू बैरागी काइँला र सम्भावित ईश्वरवल्लव को घोचपेची नै मित्रताको सबभन्दा मिल्ने बुटी बन्यो । पछि उपेन्द्र सुब्बा पनि थपिएपछि त झनै बलियो बनिहाल्यो । आजसम्म पनि हामी बेलाबेला, यस्तै घोचपेच गरिरहन्छौँ, यसरी नै । यस्तै घोचपेच नै सिर्जनशील अराजकता को आन्दोलनका लागि अरू ऊर्जा भएर थपिन्छ ।
हामीजस्तै मान्छे हो ऊ
हाम्रो उत्पीडनको कथाले छुँदैन
हामी कि ऊ ?
हाम्रो आँसुको नदीले पनि छुँदैन ।
आधारातको तङ्सिङ बाट ।
होङकोङ कवितासङ्ग्रह बजारमा आएको धेर भएको छैन, अस्ति मङ्सिरमा मात्रै हो । भदौमा दोस्रो संस्करण प्रकाशित करङको हिरासत मा पनि थप कविताहरू आएकै छन् । फेरि नयाँ सङ्ग्रह ? कि पैसा धेरै कमायौ ? कविताको कारखाना छ कि क्या हो हङकङमा ?- सोध्छु हाङयुगलाई । मेसिन छ मेसिन । यहाँ मेसिनसित काम गर्नुपर्छ अनि मेसिनबाट नै जन्मन्छ कविता, भन्छ ऊ । उसले भनेको मेसिन का कविताहरू होङकोङ मा सङ्ग्रहित छन्- चाउचाउ कविता को नामले । चाउचाउ भनेपछि धेरैले नेपालमा जङ्क फुड ठान्ने भइहाले । कुनै व्यापारी घरानाको ब्रान्ड एम्बेस्डर पो हो कि क्या हो यो मान्छे ? कि व्यवसाय पो थाल्यो चाउचाउको ? मलाई पनि लागेकै हो सुरुमा । बिस्तारै थाहा हुँदै आयो- चिनियाँ भाषामा चाउ को अर्थ हुँदो रहेछ टापु ।
हाङयुग जो जहाँ बस्छ वा जहाँ पसिना बगाउँछ, त्यो हङकङ आफैंंमा एउटा टापु हो । समुद्रले घेरिएको, समुद्रमाथि स्थापित । सोच्छु- यो जगत् समुद्रमय छ, प्रकोप कतिबेला आइपर्छ र यस्ता टापुहरू विलीन हुन्छन् समुद्रमै । कतिबेला नयाँ टापु पनि जन्मन्छ फेरि समुद्रमाथि नै । मानिसको जीवन केवल यही टापुजति, टापुजस्तै रहेछ । अनि पो भनेको रहेछ चाउचाउ कविता । भनेको रहेछ जीवन । आत्मिक अर्थ यस्तै लाग्दो रहेछ- टापुको । हाम्रो सन्दर्भमा सामाजिक अर्थले एक जाति पनि हुन्छ टापु । राजनीतिक अर्थले एउटा सङ्घ पनि हुन्छ टापु । अर्थ-राजनीतिबाट घोत्लिँदाचाहिँ पुँजीका लागि श्रमको प्रकार पनि हुन्छ टापु । यति बुझेपछि नाक खुम्चाउनु परेन चाउचाउ कविता सँग । हङकङको त्यही मेसिने बोध को आत्मकथन हो हाङयुगको होङकोङ । यसअघिको
कक्पिक मै पनि चाउचाउ को छनक पाइन्छ नै ।
हाङयुगको होङकोङ कविता कृतिमाथि मैले नबोलेकै हो । मैले नबोलेको प्रति उसले सामाजिक सञ्जालमार्फत् केही खिन्नताहरू व्यक्त गरेको थियो । उबेला मेरा केही रिजर्वभेसनहरू थिए । व्यवस्थाको नाम बदलियो, केही अवस्थाहरू बदलिए तर सोच्ने तरिका, काम गर्ने तरिका पुरानै छ, उल्टै अझ मौलाउँदै पो छ । अब पो झनै हामीले सिर्जनशील अराजकताको अभियानमा अझ दृढतासहित लाग्नुपर्नेछ, अब पो लड्नुपर्नेछ- कहाँबाट ल्यायो यो चाउचाउ ? तेस्रो आयाम बाट इन्द्रबहादुर राई लीला लेखन तिर लागे, हाङयुगले पनि लीला कै पारा कस्यो कि क्या हो ? लागेको यति थियो तर अब त्यो शङ्का छैन, रहँदैन । ऊ दृढतापूर्वक उभिएरै लेख्दो छ कविता । सांस्कृतिक सचेतता को पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा अथवा राजनीतिक मुक्तिको पक्षमा दरिलो उपस्थिति जनाएकै छ कविताबाट ।
रङ्गीन आविस्कार -२०५७), ढुङ्गामुढाको मन -२०५८), करङको हिरासत -२०६०/७१), कक्पिक -२०६२) र होङकोङ -२०७१) पाँचवटा कविता कृतिहरू आइसकेपछि हाङयुगको लेखन-गतिशीलताबारे धेर भन्नु परेन । फेरि आएको छ, आधा रातको तङ्सिङ -२०७१) । यिनै कृतिहरू हुन् उसको परिचयको नाभि । खासगरी करङको हिरासत ले उबेला पनि, योबेला पनि धेरैको दिमाग खज्मजाइदिएको थियो, खज्मजाइरहेकै छ । बौद्धिकताको कसीमा होस् या प्रयोगका हिसाबले यो कृति बलियो छ । कवि बैरागी काइँलाले नै पनि स्विकारेकै छन्- यी कविताहरूमा रूपगत नयाँपन टड्कारो देखा पर्छ । नेपाली साहित्यमा राष्ट्रभरिको सांस्कृतिक धुकधुकीको प्रतिध्वनि सशक्त रूपमा गुन्जित हुन दिनका लागि आदिवासी र जनजातिका श्रुति परम्पराहरू, मिथकहरू र उपमाको प्रयोग कविले गरेका छन् ।
फलामका डन्डीहरूमा सुद्र बनाइएर
आज वणर्ाश्रमको म बन्दी
अब गोता मार्छु तमोरमा छप्लाङ
सायद गङ्गा नीलो बग्नुमा
घायल प्रतिबन्धित मान्छे
खान्छ- निरीक्षणको प्लेटभरि च्युरा
पिउँछ- ट्युबेलको मुखबाट पानी
हग्छ- सिद्धान्त/मुत्छ- भाषण/ सुत्छ- आन्दोलन
करङको हिरासत बाट ।
पुराना मान्यताहरूमाथि प्रश्न गर भन्छ हाङयुग । हिजो जबरजस्त पूज्य गराइएका मानकहरूको नाडी वा धुकधुकी आजको सापेक्षतामा जाँच भन्ने हो उसले । बैरागी काइँलाको गङ्गा नीलो बग्छु कवितालाई उसले आजको लिम्बुवानी पहिचान दिन तमोर हरियो बग्छु मा पुनर्विचरण गरेको हो ।
हाङयुगलाई उत्तरआधुनिकता -वाद) सँग बढी नै नजिक भएको आरोप लाग्छ, म पनि लगाउँछु । पश्चिमा मिथकहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा हाङयुगले गहिरो गरी छामेको हो उत्तरआधुनिकतालाई । निकै लामो समयसम्म ऊ त्यसको छायामा छपक्कै छोपिएको हो । अझै पनि कतैकतै आभास नआउने होइन । बहुलता को सन्दर्भमा ऊ निकै प्रभावित पनि छ । पश्चिमा दर्शन र विचारहरूको बलियो हेक्का राख्ने भएकोले पनि उसमा यस्तो प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, उसले आजसम्मको कविता लेखनमा पश्चिमा मिथकहरूलाई थोरै मात्र प्रयोग गरेको छ । बरु, लिम्बू-मिथकहरूलाई अरू उज्यालो पार्ने काम गरेको छ । उसका कविताहरूमा पाइने लयात्मकताले लिम्बुपनाकै स्वाद दिन्छ । हङकङमा पुगेपछि अरूले जस्तै भावुक भङ्गीमा महेन्द्रीय राष्ट्रियताको फलक गाउनुपर्ने हो तर पालमकै विम्ब र भाकामा राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । परिवर्तनको पक्षमै दरिलो उपस्थिति देखाएको छ । रेमिट्यान्स को धाक पनि लगाउन छुट छ उसलाई तर कविता जतिकै वैचारिक कठोर छ ऊ । फक्ताङलुङको नोस्टाल्जिया होइन, उचाइमा शुद्ध चिन्तन गरेको छ हाङयुगले । अर्थात् लिम्बुवानी पहिचानका खातिर उसका कविताहरू व्यग्रताका साथ बग्छन् हरियो तमोरझैं ।
हाङयुगले हङकङमा सुनुवार नरेश, देवेन्द्र खेरेस, गणेश राई, भोगेन एक्लेहरूसित मिलेर सिर्जनशील साहित्य समाज स्थापना गर्यो, त्यसै मार्फत नेपाली भाषा र साहित्यको समृद्धिका लागि विचार र सिर्जना दुवै प्रक्षेपण गर्यो । उनलाई साथ र हात दुवै दिएका हुन् पत्रकार किसन राईले । यही बेला हो, देश सुब्बाले भयवाद भन्न भियाएको । दीपा एवाईले समुच्च विचार यही समय अगाडि सारिन् । रेखा साहित्य हङकङबाटै सुरु भयो । अर्थात् हाङयुग जहाँ जान्छ र वैचारिक बहसमा सामेल हुन्छ, त्यहाँ उसले सबैलाई नयाँ सोच्न बाध्य पार्छ । नेपालमै पनि पान्थर पुगेर सगुन सुसाराहरूलाई उत्तरवर्ती सोंच बनाउने बनाइदियो । यता सातदोबाटोमा तोङ्बा पिउँदापिउँदै धर्मेन्द्रविक्रमहरूलाई रङ्गवाद भन्ने बनाइदियो । उसलाई थाहा छ, साहित्यिक विचारका लागि सदस्यता-सङ्ख्या जरुरी छैन ।
हाङयुग, उपेन्द्र र म, कसैसित पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता थिएन । शाही कदमका विरुद्ध केही दलहरू सडकमा थिए । प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सत्तामा पुगेका दलको विरुद्ध पनि थियो आन्दोलन । निरङ्कुश सत्तालाई पूरापूर नहटाएसम्म हाम्रो आन्दोलन -सिर्जनशील अराजकता) को पनि अर्थ नहुने निष्कर्षसहित हामी पनि आन्दोलनमा सरिक भयौँ । हङकङ उड्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि हाङयुग पीके क्याम्पसछेउ बागबजारमा प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्दै थियो । जुध्दै थियो । त्यही दिन मेरो टाउको फुट्यो । म घाइते भएँ । हत्केला र नाडीमा कठबासको डाम बोकेरै हङकङ उडेको हो ऊ । त्यही कठबासको डामले
कक्पिक मा उसलाई लेखाएथ्यो
काट्दछौं फेरि पनि
मनका औंलाहरूमा नङ
तर नङ पलाइबस्छ
-नङ र निरङ्कुशता कविताबाट ।
हाङयुग अज्ञातबारे बोल्दा उपेन्द्र सुब्बाले भनेका थिए, मचाहिँ हाङयुगको जस्तो कविता लेख्न चाहन्थेँ, हाङयुगचाहिँ मजस्तो विदेश जान चाहन्थेछ ।
कुरोले भेट खाएकै छ । विज्ञान पढ्न इलामबाट काठमाडौं पसेको हाङयुग अस्कल क्याम्पसमा दुई वर्षभन्दा बढी टिकेन । कला र साहित्य लाई
आफ्नो ठान्ने ऊ मानविकी पढ्न आरआरतिर हुँइकियो । यहीँबाट उसले समाजलाई नजिकबाट नियाल्न थाल्यो, सक्यो । मस्तिष्कभरि नयाँ केही गर्ने सोचसहित साहित्यिक अभियानमा होमिँदाहोमिँदै कठबासको डाम बोकेर नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट उडेको हाङयुगको हङकङ-मोह उस्तरी हो भन्ने लाग्दैन । तर, जानै पर्ने थियो । उसको जीवनसाथी उतै थिइन् ।
हङकङ गएको पाँच वर्षपछि हाङयुग अज्ञात एकाएक गायब भयो । उतै रहेका साथीहरूले पनि भेटाएनन्, हामीले भेट्ने कुरै भएन । आक्कलझुक्कल सुब्बा सापको नाममा फेसबुकमा भेटिन्थ्यो, खासै कुराकानी हुँदैनथ्यो । पछि थाहा भयो, उसको पारिवारिक जीवनमा गडबड भएछ । मैले धेरै समयसम्म हाङयुगको पारिवारिक जीवनबारे सोधिनँ । उसलाई चोट नपरोस् भन्ने मेरो चाह हो । अब चालीसेले छोयो । घरबार जमेको छैन । भावुक नहुने कुरै रहँदैन । उपेन्द्रजी पनि यही कुरा गरिरहन्छन् । केही महिनाअघि फेसबुकको च्याटमा सोधेथेँ, बिहे कहिले गर्ने हाउ ? उसले तुरुन्तै जवाफ फर्काएको थियो, म व्यवहारमा बेइमान हुँला तर प्रेममा सधैं इमानदार छु सर । मैले अरू जोड गर्ने कुरा भएन । यति भन्न सक्छु, ऊ हिजोकै प्रेममा इमानदार छ अझै । त्यसैले उसले होङकोङ लेख्यो । यो उसको आदत नै भइसक्यो ।
यसपल्टको हिउँदभरि म गाउँमा अलैंची गोड्दै बसेँ । हिउँदको ठिही, अलैंचीघारीको चिस्यान, उसमाथि काठमाडौंले दिएको पिनासको बिमार, सहेरै गरेँ काम । अलैंचीघारीबाटै मोबाइलमा चलाउँथेँ फेसबुक । हाङयुगसँग भइरहन्थ्यो कुराकानी । ऊ पनि चाँडै नेपाल आउने र आधुनिक खेती गर्ने कुरामा सहमत छ । उडिगएको त्यो जहाज फर्केर आउने कुराले म धेरै उत्साहित छु ।
यता उपेन्द्र सुब्बाको कथा-सङ्ग्रह लाटो पहाड को पाण्डुलिपि-पाठक बन्नै पर्ने भएकोले म काठमाडौं आएँ । लाटो पहाड पढिरहँदा नै हाङयुगले १६ वटा पहिचानवादी कविता पठायो । मन पर्यो । किताब निकाल्ने कुरा भयो । आधारातको तङ्सिङ नाम जुर्यो । मैले भूमिका लेखिदिनुपर्ने प्रस्ताव उसले राख्यो । हाङयुगको कविताले बोक्ने सामथ्र्यमाथि भूमिका लेख्न सक्ने सामथ्र्य ममा कहाँ हुनु ? तर, हाङयुग अज्ञात अर्थात् पालमको भाकामा ऊ आफ्नो पहिचान खोज्छ, उसका बारे भने म केही लेख्न अवश्य सक्छु । त्यही लेख्ने हो मैले । जस्तो कि उसैको कविता छ आधारातको तङ्सिङ मा
तिगेनजोङ्ना आमाको उत्पीडित आत्मा
विद्रोहका लस्कर लागेका छन् मेला परेड
अब फुट्छ मुटु ह्वालह्वाल्ती रगत छादेर
आधारातमा तङसिङ नाँचेर
निस्केका प्लेटोको गुफाबाट विचारका रेबिज चमेराहरू छानामाथि छाया उडेका
हलभित्र झ्यालबाट ढोकाबाट घुसेका बलात् हस्तक्षेपकारी षड्यन्त्रका मौन शङ्खध्वनि
तेत्लुङ तेत्लुङ तेत्लुङ
तेरे तेरे तेरे
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७१ १२:२४
दरबारी शानको सनकी स्वाद
हाम्रो समाजमा केही मानिस राज्यशक्तिबाट अति नै भयभीत हन्छन्, प्रभावित हुन्छन् र त्यसकै आधारमा आफ्ना धारणा र विचार निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । राज्यशक्तिको आभाको निर्माण गरेर तिनले त्यसै आधारमा समाजमा किस्साहरू जन्माइरहेका हुन्छन् र अरूलाई बाँडिरहेका हुन्छन्
चैत्र ६, २०७१ श्यामल
एक वर्ष, क्षेत्रीय विकास केन्द्रहरूको भ्रमणका सिलसिलामा राजा वीरेन्द्र आफ्नी बडामहारानी ऐश्वर्यसहित गोरखा पुगेका थिए । पञ्चप्रशासनले राजारानीलाई आफ्ना कामको फेहरिस्त बुुझाउने र केही नयाँ आयोजना उद्घाटन 'मौसुफका बाहुली' बाट गराउने काम हुने नै भयो ।
१) राजाको थपडी, रानीको उद्घाटन
एक वर्ष, क्षेत्रीय विकास केन्द्रहरूको भ्रमणका सिलसिलामा राजा वीरेन्द्र आफ्नी बडामहारानी ऐश्वर्यसहित गोरखा पुगेका थिए । पञ्चप्रशासनले राजारानीलाई आफ्ना कामको फेहरिस्त बुुझाउने र केही नयाँ आयोजना उद्घाटन मौसुफका बाहुली बाट गराउने काम हुने नै भयो । तदनुसार गोरखा बजार नजिकैको एक गाउँमा खानेपानी उद्घाटन हुने तय भयो । हेलिप्याडदेखि बाजागाजाका साथ राजारानीलाई रातो तुल बिछ्याएर उद्घाटनस्थलसम्म सवारी चलाइयो । राजा र पञ्चायतको जयगान भयो । बडामहारानीले धारोका टुटी खोलिन् । राजाले ताली बजाए । धाराबाट पानी झर्यो । नन्दीभृंगी गणहरूले तालीका पर्रा छुटाए ।
ज्ाानकार गोरखालीका अनुसार, त्यो जनतालाई पानी नखुवाउने नक्कली धारो थियो । अञ्चलाधीशज्यूका प्रपञ्चले पूरा नै नभएको त्यस आयोजनालाई पूरा भएको देखाउन सुरक्षाकर्मीहरूको दलबलसहित केही स्थानीय पञ्च मनुवाहरूले तीन सय फिटजति माथिको तर उद्घाटन स्थलबाट नदेखिने खोल्साबाट गाग्रीका गाग्री पानी खन्याइएको थियो । र, त्यही जलधारालाई पाइपका माध्यमबाट धाराको टुटीसम्म ल्याइपुर्याइएको थियो । उद्घाटनको केही क्षणमै धारामा पानी थिएन ।
यस घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ, उनी हान्स क्रिस्चियन एन्डरसन नामक प्रख्यात कथाकारको बादशाहको नयाँ कपडा शीर्षक कथाका पात्र राजा थिए । आफ्ना जनताका लागि बनाइएको करोडौं खर्च हुने आयोजना सही हो कि होइन भन्नेबारे उनलाई कुनै मतलब थिएन । कुनै पनि निरंकुश शासकका लागि आफ्ना चरहरू र अनुचरहरू नै भरपर्दा हुन्छन् । तिनका लागि सत्यको खासै अर्थ रहन्न । विरुदावली र स्तुतिगान सुन्दैमा तिनको जीवन बित्छ । विकासप्रेमी भनिएका राजा वीरेन्द्रको यस्तो हाल थियो । भनिन्छ, एकपटक उनलाई काँक्रो नहुने याममा काँक्रो खान मन लाग्यो । उनका लागि काँक्रो ल्याउन सुदूर पश्चिमका नौ जिल्लाभरि हेलिकोप्टर घुम्यो ।
२) लक्ष्यबहादुर गुरुङको थप्पड
२०४१ सालको कुनै महिना । हेटौंडास्थित वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको परिसरभित्र नेपाल रेडक्रसको महाधिवेशन चलिरहेको थियो । तीन दिवसीय महाधिवेशनको अन्तिम दिन । यस लेखकलाई र्यापोर्टर बनाइएको थियो । आयोजनामा स्टाफका तर्फबाट अहम् जिम्मेवारीमा खटिएकामध्ये एक थियो यो लेखक । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको बोल्ने क्रम जारी नै थियो ।
त्यस साँझ, परम्पराअनुसार, संस्थाका अध्यक्षबाट महाधिवेशनका सहभागीहरूलाई रात्रिभोज दिने कार्यक्रम थियो । प्रस्ट छ, अध्यक्ष सरकार थिइन्, राजाकी कान्छी काकी अर्थात् श्री ५ अधिराजकुमारी हेलेन शाह । सरकार अध्यक्ष भएपछि उनले दिने भोजको प्रबन्धको जिम्मा स्वत: अञ्चलाधीशको हुँदो रहेछ । नारायणी अञ्चलको सदरमुकाम हेटौंडा थियो र अञ्चलाधीश थिए लक्ष्यबहादर गुरुङ । आजको रात्रिभोजको जिम्मा उनकै भयो । यस लेखकलाई रात्रिभोजको कार्यक्रम बनाउँदाखेरि नै अध्यक्षले दिने रात्रिभोजको जानकारी थियो तर त्यसको जिम्मा अञ्चलाधीशको हुन्छ भन्ने कुराको केही पत्तो थिएन ।
दिउँसो महाधिवेशन कक्षको मूलद्वारमा एकजना मुसलमानजस्तो लाग्ने व्यक्ति देखा पर्यो र ऊ हात जोडेर भित्र कतै चियाइरहेको थियो । गुरुङजी भित्रै हुनु स्वाभाविक थियो, किनभने सरकार त्यहाँ थिइन् । उक्त मासु व्यापारी बडो प्रसन्न चित्तले अञ्चलाधीशलाई आफ्नो काम जाहेरी गर्न आएको थियो । ऊ आफ्नो सुझबुझपूर्ण कामका लागि स्यावासी पाउने ध्येयले आएको थियो । गुरुङजीका बडीगार्ड प्रहरीले ऊ छेउ आएर केही सोधपुछ गरे । उसले अञ्चलाधीशज्यूसँग केही कुरा गर्नु थियो मालिक ! भनिरहेको थियो ।
अञ्चलाधीशले दुईवटा खसी काटेर मासु प्रबन्ध गर्न आफ्ना स्थानीय आसेपासेसहित एकजना स्थानीय मासु व्यापारीलाई ठेक्का दिएका रहेछन् । र, मासु व्यवसायी महारानीलाई आफूले बनाएको अब्बल दर्जाको मासु ख्वाउन पाउने र त्यसबाट भविष्यमा आफ्नो व्यवसायको भलो नै हुने चिताएर बसेको हुँदो हो । उसले रात्रिभोजका लागि मासु तयार गरेको सुसमाचार लिएर आएको थियो । किनभने राजा रानीजस्ताले छालासहितको मासु खाँदैनन् होला भन्ने बुद्धि लडाएर उसले खसीका छाला काडेर मासु मात्र तयार गरेको थियो । अनि गुरुङजी महाधिवेशनमा महारानीको पछिल्लो आसनबाट उठेर सरासर मूलढोकाबाट बाहिर करिडोरतर्फ लम्किए । र, मधेसी मूलको त्यस मासु व्यवसायीको ठीक साम्ने उपस्थित भए । उसले पूरै झुकेर दण्डवत् टक्र्यायो ।
मासु तयार गरिस् त ? गुरुङजीले जंगी शैलीमा सोधेका थिए ।
हाँ प्रभुु, सायद उसले यस्तै भनेको थियो । साना व्यापारीले बोल्ने भाषा यस्तै हुनु थियो ।
बता, कसरी बनाइस् ? अञ्चलाधीशज्यूको सोधाइको मुद्राले यही सोधेको हो भनेर किटान गर्न सकिन्थ्यो ।
हजुर, छाला निकालिदिएँ । प्योर मासु तयार गरी आफैं लगी पुर्याइदिसकेको छु हजुर ।
तत्काल गुरुंङजी आगबबुला भए । र, केही पर्खंदै नपर्खी भटाभट मासु व्यवसायीको गालामा चड्कन लगाउन थाले । ऊ तर्सिरहेको थियो । केही बुझिरहेको थिएन । स्साला छाला किन काढेको ? बारम्बार क्रूद्ध प्रशासकका मुखबाट यति मात्र सुनिरहेको थियो । जतिपटक गुरुङजी यो वाक्य उच्चारण गर्थे ? उतिपटक उसका गालामा थप्पड बजि्ररहेको थियो । महाधिवेशनको अग्रासनमा बसेका र ढोकातिर दृष्टि दिन सक्नेहरूको ध्यान गुरुङजीको यस चर्तिकलातिर आकषिर्त भइरहेको थियो । केन्द्रीय आसनमा आरुढ अध्यक्ष अर्थात् महारानीको ध्यान पनि त्यतै गयो । यो सारा देखिरहेको म ढोकातर्फ हान्निएँ । र भनें, अञ्चलाधीशज्यू, भित्र अलि डिस्टर्व भयो । बाहिर कतै बसेर ऊसित राम्ररी कुरा गर्न मिल्दैन ? उता अञ्चलाधीश भने ऊतिर घुरिरहेका थिए ।
मैले मासु व्यवसायीका पाखुरा समातेर अञ्चलाधीशको थप्पडबाट उसलाई जोगाउँदै बगैंचाको एक कुनातिर लगें । मसँग बिल्कुल नबोलीकनै अञ्चलाधीश गुरुङजी जिस्काइएको सर्प जस्तै फ्वाँ फ्वाँ गर्दै हाम्रो पछिपछि आइरहेका थिए, पछाडि पछाडि उनको अंगरक्षक कुदिरहेको थियो ।
जतिसुकै घाटा परे पनि एक घन्टामा छालासहितको मासु तयार गर्ने सर्तमा ऊ फिर्ता भयो तर उसको मेघाच्छन्न भइसकेको अनुहारमा खुसी उदाएको देखिएन । ऊ अपमानित भइरहेको थियो । बेलुकाको भोजमा महारानी, अञ्चलाधीश र सबै सहभागी महारानीले मन पराउने मासुसहितको भोजमा रमाइरहेका थिए । तर राम्रो मासु ख्वाएकोमा स्यावासी पाउन लालायित मासु व्यापारी त्यहाँ नहुनु स्वाभाविकै थियो ।
३) पृथ्वीनारायणको रहस्यमयी जलकूप
ग्ाोरखा दरबारको पूर्वपट्ट िनारेश्वर जाने पुरानो बाटो छ र भञ्ज्याङसँगै माथि डाँडोमा रहेको टावरमा उक्लिने बिन्दुमा दुईटा ठूल्ठूला ढुंगा छन् । ती ढुंगाको पूर्वपट्टकिो खोल्सोसँगैको एउटा खोंचको जलपेटारोको कथा हो यो । हाल त्यो स्थानमा पानी छैन ।
लोक विश्वासअनुसार त्यो पानी माप्पाको थियो । त्यसै पानीको प्रतापले पृथ्वीनारायण शाहले कमाल गरे । त्यसैका प्रतापले जति रानी पटरानी भए पनि उनी तिनको यौन क्षुधा शान्त गर्न सक्थे । त्यसै पानीको तेजले सिरु झारको एक पत्ताले उनी तीनवर्षे मत्त जोधाहा रांगोको गर्धन ठुन्क्याउन सक्थे । नेपाल राज्यको विस्तारमा त्यस पानीको ठूलो भूमिका थियो । गुरु गोरखनाथले दिएको दहीको भन्दा बढी असरदार थियो त्यो जलकूपको पानी । त्यसैले त्यो उनका निमित्त सुरक्षित राखिएको थियो । अरूले त्यहाँको पानी खान पाउँदैनथे । सैनिकको नित्य पहराले त्यस जलकूपलाई अरूका निमित्त निषेध गरेको थियो ।
ग्ाोरखनाथ र गोरखकालीका पुजारीहरूलाई यस विश्वासले गाँजेको थियो । ती पृथ्वीनारायणजस्तै सौर्य र वीरता, यौनशक्ति र ख्यातिका लागि अहोरात्र सोचिरहेका थिए । करिब बीस वर्षअघि यो लेखक गोरखामा हुँदा पुजारीहरूसँग त्यहाँको विशिष्ट समाजका रहस्य, किंवदन्ती र तिनको आफनै जीवनबारे बुझ्न उनीहरूको नजिक पुग्ने प्रयास गरेको थियो । उठ्दा बस्दा रोचक तथ्य फेला पर्यो । पुजारीहरूका अनुसार पृथ्वीनारायण नुवाकोट सरेपछि त्यस जलकूपलाई रातारात पुरियो । यसमा सत्यको अंश हुनुपर्छ । पानी पक्कै उत्तम गुणयुक्त र लवणयुक्त हुँदो हो । राजाहरू आफ्ना धीरोदात्त गण, वीरोचित गण अरूले नपाओस् र त्यसकै बलमा अकण्टक शासन गर्न पाइयोस् भन्ने चाहन्थे । अत: त्यस्तो जलकूप राजाको बसाइ सराइपछि नष्ट गरियो होला । त्यस पानीलाई राजाले मात्र खाने खाने बनाइएकाले त्यो झन् रहस्यमय बन्यो होला । जनताको पहुँचबाट त्यो पानी टाढै रहनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।
यो रहस्यको भेउ पाएका पाँचजना पुजारीले त्यो पानी फेला पार्न सकिन्छ कि भनी प्रयास गरे । रातको समयमा, लुकीछिपी, लगातार पाँच दिनसम्म खन्दै जाँदा पनि तिनले पानीको जरो फेला पार्न सकेनन् । दुई टाँगा बास छिरे तर पानी फेला परेन । त्यसपछि आजित हुँदै उनीहरू फर्के । तिनको सपनामा तुषारापात भयो । अरू कसैले पनि भोगचलन गरी आफूजस्तै हुन नपाउन् भनी नेपालको एकीकरणका यी महानायकले बडो कुशलतापूर्वक त्यस जलकूपलाई गर्तमा छिराइदिएका रहेछन् ।
४) दुल्लुको रुप्स्या पानी
दैलेख जिल्लाको दुल्लु नेपालको पुरानो बाइसी राज्यमध्ये एक हो । त्यहाँका राजाको ऐतिहासिक दरबार माओवादीले सशस्त्र युद्धका बेला भत्काइदिएको छ । त्यो अझै बनाइएको छैन ।
मेरो घरको अति महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थ ढकुल्ल्या का भित्री पानाको एक ठाउँमा रुप्स्यापानी तोड्याको भनी तिथि मिति लेखिएको छ जुन मैले अन्तिमपटक २०३० सालमा पढेको थिएँ । र मेरा पिताजीले यस टिपोटका पछाडिको रहस्यबारे मलाई बताउनुभएको थियो । रुप्स्या पानी भन्नाले रूपसी पानी हो । लोकचर्चा अनुसार त्यस अद्भुत जलमा मानिसको रूप बदलिदिने गुण थियो । त्यसमा नुहाउँदा शरीरका सारा रोगहरू निर्मुल हुन्थे, कलौटो गोरो हुन्थ्यो, घीनलाग्दो वर्णका मानिस राजकुमार राजकुमारीजस्तै उज्याला हुन्थे । त्यसैले त्यो दरबारका राजा रानी र तिनका पि्रय सन्तानबाहेकका अरू कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउन्नथ्यो । त्यतिबेलाको कडा राजकीय ऐलानका अगाडि त्यहाँ पुग्ने हिम्मत कसैको थिएन । तर त्यसकै छेउबाट दरबार उक्लने बाटो थियो ।
एक दिन दुल्लु दरबारभन्दा निकै टाढाकी एक गरिब दलित महिला -सर्किनी) आफूमाथि परेको अन्यायबारे तत्कालीन राजासमक्ष फिराद गर्न साहस बटुलेर आई । उसको सामाजिक र आर्थिक हैसियतअनुसार ऊ दरबारमा जाँदै भए पनि न ऊसँग सफा पोसाक थियो, न त नियमित रूपमा नुहाउने धुने संस्कार नै । अत: यथा हालतमा ऊ राजाको दरबारतर्फ लागी ।
दरबारको नजिक आइपुग्दा हठात् उसले सोची, यति फोहोरी छ भनेर राजाका मानिसले हप्काएर उसलाई फिर्ता पठाइदेलान् । छेउतिर कतै पानी भए, हातमुख धोएर जानुपर्यो । उसले बाटोको दायातर्फ पानीको निर्मल कुवा देखी । न उसलाई यो राजाले मात्र प्रयोग गर्ने पानी हो भन्ने थाहा थियो, न त्यो थाहा दिने मानिस अर्थात् पाले नै त्यहाँ थिए । राजाज्ञाले त्यस वरपरका मानिस डराएरै त्यस कुवातिर जाँदैनथे । तर यस दलित महिलाले त्यस पानीलाई साधारण नै ठानी र सरासर गएर हातमुख धोई ।
तत्काल उसको शरीरमा अनौठो फुर्ती उत्पन्न भयो । यो उसले महसुस गरी । तर उसलाई निर्मल पानीले मुख धोएको र थकाइ मरेको कारणले यस्तो फुर्ती आएको ठानी । सरासर दरबारतर्फ उकालो लागी । उसलाई दरबार वरिपरिका सबैले बडो रुचिपूर्वक हेरिरहेका थिए । ऊ सोध्दै गई । सेनाका पहरेदारहरूलेे पनि झुकेर कुर्नेस कुर्नेस गरिरहेका थिए । द्वारेहरूले पनि उसलाई भाला हटाएर भित्र प्रवेश गराए । अत्रानताबसै ऊ राजाको सम्मुख पुगी । राजाले त उसको दर्शन गरिरहेका छन् ! आज्ञाकारी पुत्रले आफ्नी मुमा महारानीलाई गरेझैं व्यवहार गरिरहेका छन् । ऊ छक्क परी । केही बोल्न सकिन ।
मुमा, राजाले सोधे, यस्ता चिथडा कपडामा कता सवारी होइस्याथ्यो ?
उसले बोल्ने केही थिएन । ऊ प्वाक्क परेर राजातर्फ हेरिरहेकी मात्र थिई । त्यति नै बेला मुमा महारानी राजाको कक्षमा प्रवेश गरिन् । राजा जति चकित भए, उनी पनि उत्तिकै चकित भइन् ।
सर्किनीले आफू आउनाको कारण बताइन् । राजा झल्यास्स भए । उनले त्यस पानीमा त्यस महिलाले नुहाएकी थिई कि भनी सोधे । जब नुहाएको थाहा पाए, तब उनी लज्जित भए । र, सर्किनी महिलाकोे फिराद सुनेर भाइभारदारका जिम्मा लगाए । यस घटनाबाट लज्जित राजाले तत्काल रुप्स्या पानीको नाउलो -जलकूप) सदाका लागि ढाकिदिने आज्ञा जारी गरे । र, निकै ठूलो तामाको ढकनी बनाएर त्यसलाई तोडिदिए -ढाकिदिए) ।
त्यही मिति ढकुल्ल्यामा लेखिएको छ । यो रुप्स्या पानी साहित्यकार डा. मधुसूदन गिरीको घरबाट दुल्लू दरबार उक्लने बाटोमा पर्छ । मेरा सम्म्मानित मित्रहरू खगेन्द्र संग्रौला -जसले स्व. राजा दीपेन्द्रलाई भतिज भन्नुहुन्थ्यो) र विमल निभालाई पनि त्यो ठाउँनिरै पुगेर मैले देखाएको थिएँ । उहाँहरूको स्मृतिमा सायद त्यो तोड्याको रुप्स्या पानी जीवितै हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७१ १२:१६